Midowga Yurub oo deeqaha dhaqaale ee Afrika siiso ku badaleeysa joojinta mahaajirinta ka imanaya qaaradda | Somaliska
Kulankii ay dhawaan madaxda qaaradda Yurub ku yeesheen jasiiradda Malta ayaa looga munaaqishoday arrimaha la dagaalanka argagaxisadda iyo muhaajiriinta. Kulankoodan ayaa sidoo kale la isku af gartay in deeqda dhaqaale ee qaaradda Afrika la siiyo loo weeciyo tababaro la siinayo ilaaladda xeebaha Liiya si loo hooga hortago muhaajirinta halkaasi ka soo qul quleeysa.
Madaxda Yurub ayaa tilmaamay in xeebaha badda dhexe iyo dhanka Liibiya ay yihiin meesha keliya ay weli muhaajiriinta ka soo laataaban, muhiimna loo arko in la xirro marba haddiiba la xiray wadooyinkii ka imanayey Turkiga iyo Gariiga oo sanadkii 2015-ta ka gudbuun xaqootigii ugu badanaa tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunidda. Hogaamiyeyaashu waxeey sheegeen in talaabadan ay bad baadin karto kumaaan kun oo xeebaha badda dhexe naftooda ku haligi lahaa.Madaxda ayaa hoosta ka xariiqay in hey’adda Qarammadda Midoobay laanteeda u qaabilsan qaxootiga gacan ka geeysan doonto howlgalka Liibiya lugu taba barayo ilaaladda xeebaheeda.
“Waxaanu bad baadineynaa naf isku soo biimeeyneysa badda dhexe, waxaanu taageero u fidineeynaa Liibiya iyo horumarkeeda iyo suurgalnimadda xoojinta ilaalinta xuduudaheeda iyo xaaladaha guud ee nolosha la xirriirta” ayuu yiri ra’iisal wasaaraha Iswiidhan Stefan Löfven oo tilmaamayey sida gollaha u gacan siinayo Liibiya si looga hortago qaxootaga ka soo gala Yurub. Ugu dambeyntiina gollaha ayaa dhaqaalaha howlgalkan waxaa ay qeyb ka qaadayaan santuuqa dhaqaale ee qaaradda Afrika loogu talagalay.